Vietjet: fitomboana mahatalanjona na eo aza ny tsenan'ny fiaramanidina Vietnamianina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Vietnam » Vietjet: fitomboana mahatalanjona na eo aza ny tsenan'ny fiaramanidina Vietnamianina
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Vaovao Mafana Vietnam
VietjetMendri-piderana ny valin'ny asa aman-draharaha tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2019, miaraka amin'ny fidiram-bolan'ny fitaterana an'habakabaka amin'ny VND20,148 miliara, fiakarana 22 isan-jato raha oharina amin'ny vanim-potoana io tamin'ny taon-dasa. Niteraka tombony mialoha ny hetra tamin'ny VND1,563 miliara, nanamarika fiakarana 16 isan-jato isan-taona.
Ny vola miditra natambatra, anisan'izany ny valin'ny asa azo tamin'ny varotra fiaramanidina, dia nahatratra mihoatra ny VND26.3 trillion, fiakarana 24 isan-jato. Ny tombom-barotra alohan'ny hetra dia saika VND2.4 trillion, mitovy amin'ny fisondrotana 11 isan-taona isan-taona.
Nandritra izay enim-bolana lasa izay, Vietnam dia niasa sidina 68,821, mitovy 45 isan-jaton'ny sidina totalin'ny fiaramanidina Vietnamese rehetra. Ny isan'ny sidina midika hoe nitondra mpandeha 13.5 tapitrisa i Vietjet tamin'ny làlana rehetra tantanan'ny mpitatitra. Vietnamianina dia nitana ny laharam-pahamehany amin'ny fitaterana an-trano miaraka amin'ny tsenan'ny 44 isan-jato tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona. i Vietnam Airlines faharoa tamin'ny 34 isan-jato.
Ny fisondrotan'i Vietnamjet eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia mbola malalaka hatrany, noho ny taha tombony azo avy amin'ny fidiram-bola fanampiny sy ny vidin'ny solika ambany. Ny fitomboan'ny tsena iraisampirenena dia nahazo an'i Vietnam fa nitombo ny vola vahiny. Ny isan'ny mpandeha amin'ny zotra iraisam-pirenena tantanin'i Vietnam dia nitombo 35 isan-jato, ary mpandeha efa ho 4 tapitrisa. Ny fidiram-bolan'ny serivisy iraisam-pirenena dia nihoatra ny 54 isan-jaton'ny vola miditra amin'ny fitaterana an'habakabaka Vietnamjet. Ny fidiram-bola an-tendrony sy ny entana dia mihoatra ny VND5.5 trillion, nitombo hatramin'ny 21 isan-jato tamin'ny lasa lasa 27 isan-jato tamin'ity taona ity, noho ny fitomboan'ny asa iraisam-pirenena.
Nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona, namoaka lalam-pirenena vaovao sivy tany Japon, Hong Kong, Indonezia, Sina ary làlam-pirenena telo hafa i Vietjet. Ireo zotra vao nosokafana ireo dia mitondra ny làlan'i Vietjet manerantany hatramin'ny 120 misy zotra iraisam-pirenena 78 sy lalam-pirenena 42. Ny tambajotram-pisidinan'i Vietjet dia mandrakotra toerana maromaro any Vietnam, Japon, Hong Kong, Singapore, Korea atsimo, Taiwan, Thailand, Myanmar, Malaysia, Kambodza, Sina, sns. Vietnamjet koa dia manidina amin'ny seranam-piaramanidina maro eran'izao tontolo izao, ao Dubai ary Doha.
Nandritra ny vanim-potoana dinihina, 16.3 miliara kilometatra ny mpandeha amin'ny fidiram-bolan'i Vietnam (RPK), nitombo 22 isan-jato isan-taona. Ny isan'ny entana dia 88 isan-jato eo ho eo, ny fahatokisana ara-teknika dia 99.64 isan-jato ary ny fampisehoana an-tsakany sy an-davany (OTP) dia nahatratra 81.5 isan-jato.
Ny fananana ara-bola an'i Vietjet dia nahatratra VND15,622 miliara, nitombo 32 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ny fitambaran'ny fananan'i Vietjet dia mitentina efa ho VND44.5 trillion, fiakarana 30 isan-jato isan-taona; izay mihoatra ny VND21.9 tapitrisa tapitrisa no fananana maharitra, mitaky 49 isan-jaton'ny fananana manontolo. Ny tahan'ny trosa amin'ny vola dia 0.50, izay tsara raha oharina amin'ny 0.64 tamin'ny taon-dasa. Ny fivorian'ny fivorian'ny tompon-tany isan-taona tamin'ny volana aprily dia nanapa-kevitra ny handoa ny dividend 2018 amin'ny tahan'ny 55%, avo kokoa noho ny tahan'ny 50% nekena tamin'ny fivorian'ny tompon-tany isan-taona tamin'ny taon-dasa.
Nandritra izay enim-bolana lasa izay, Vietnam dia nanolotra kinova vaovao an'ny fampiharana Vietjet Air izay nampifangaro ny mpikambana ao amin'ny Vietjet SkyClub miaraka amina fandrisihana sy fitaovam-piasana maro, toy ny fividianana tapakila fiaramanidina haingana amin'ny finday avo lenta, manolotra tapakila VND0 isaky ny zoma ary sarany fandoavam-bola maimaim-poana, sns
Akademia Vietjet Aviation ao amin'ny Ho Chi Minh City High-Tech Park izay misy ao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh dia fenitra iraisam-pirenena, toeram-pampiofanana maoderina, mampiasa fitaovana sy programa fanofanana arakaraka ny fenitra iorenan'ny Vondrona Eoropeana ho an'ny fiarovana ny sidina (EASA). Nandamina fampianarana 250 ho an'ny mpanamory fiaramanidina 5,623, ekipa kabine, injeniera, mpiasa fiaramanidina. Ny ivon-toerana Simulator (SIM) ao amin'ny Akademia Vietjet Aviation dia nanomboka niasa nanomboka ny volana novambra 2018. Hatreto dia voaofana 3,178 ora ho an'ny mpiofana sy mpampianatra 2.809. Nahazo fanamarinana ATO haavo 2 avy amin'ny EASA, fenitra mitarika an'izao tontolo izao, ny Vietnam SIM's Center.
Vietjet dia iray amin'ireo orinasa vahiny vitsivitsy ary hany fikambanana Vietnamianina tonga mpikambana ao amin'ny Japan Business Federation - Keidanren, fikambanana iray misy mpikambana ahitana orinasa Japoney manerantany. Tamin'io andro io ihany, lasa mpikambana ao amin'ny Keidanren ihany koa ny Facebook. Vietnamjet dia nomem-boninahitra ihany koa ho iray amin'ireo orinasa voatanisa ambony ao Vietnam tamin'ny 2018.
Miaraka amin'ny valin'ny asa tsara, ny fanitarana ny tambajotra sidina sidina sy manerantany, miaraka amin'ny fahaizana mitantana ny vidiny sy ny kalitaon'ny asa, manantena ny hitazona fitomboana tsara i Vietnam ao anatin'ny telo taona ho avy, hoy ny tatitry ny Board of Management tamin'ny fivorian'ny General General shareholder '. Vietnamjet dia hanohy ny toerany eo amin'ny resaka fitaterana an-trano ary hifantoka amin'ny fanitarana ny zotra iraisam-pirenena. Vietnamjet koa dia mihevitra ny fahafaha-mampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa, terminal, serivisy teknika, serivisy an-tanety, fanofanana ary fampiroboroboana ny fahombiazany, izay tombony ho an'ny zotram-piaramanidina miaraka amin'ny fanitarana ny sehatry ny fiaramanidina.